यो डोरी को मद्दतले वजन गर्न सम्भव छ? अनुभव र सिफारिसहरू
डोरी - सबै बाल्यकाल मनपर्ने खेल उपकरण। माथि बढ्दै, हामी शायद यो बारे सम्झना। तर, वास्तवमा, यो एक किफायती, कम लागत घरमा प्रयोग, र महिला र पुरुष लागि उपयुक्त छ कि सिम्युलेटर छ। सामान्य र शरीर को भौतिक अवस्था मा विशेष एक लाभदायक प्रभाव डोरी जम्पिङ, तिनीहरूले कुनै पनि तालिम भाग हो। त्यसैले, केही बिन्दुमा हामी बाल्यकाल को सम्झना र यो डोरी को मद्दतले वजन गर्न सम्भव छ कि छैन भनेर बारे आश्चर्य छन्?
एक बोसो पगाल्ने रूपमा डोरी
यो पनि एउटा छोटो समय डोरी मा हाम फाल्न गर्नुपर्छ र यो अभ्यास को समयमा, लोड शरीर को लगभग सबै मांसपेशीमा छ कि स्पष्ट हुन्छ। सबै भन्दा ठूलो अन पतन हुनत बाछो मांसपेशीमा, अझै सम्पूर्ण मांसपेशी मा वितरण र सुरिलो प्रभाव प्रदान गर्दछ। यो कूद 15 मिनेट 200 किलो कैलोरी देखि राहत भनेर चिनिन्छ। राम्रो तीव्र खेल - यो डोरी कूद, बाहिर जान्छ। साथै, यी अभ्यास रक्त वृद्धि। त्यसैले, बोसो संग्रह को जम्मा रोकन, चयापचय बढाउने। र डोरी, साथै अन्य खेल कूद यसको टोन हुर्काउन र sagging हटाइ, छाला, कस। त्यसैले यसलाई सम्भव डोरी को मद्दतले वजन छ?
यी अभ्यास को समर्थकहरूको वजन डोरी को मदद संग, साथै यो कसरी गर्न झैँ गुमाउन कि विकास र विशेष प्रविधी को एक सेट प्रचार, व्याख्या। सबै निर्देशनहरू दुई मुख्य बुँदा छन्।
पहिलो, यो सही यो व्यायाम गर्न महत्त्वपूर्ण छ। अवशोषित र स्पाइनल चोट लागेको र जोइन्टहरूमा बच्न गर्दा डुब्नु कूद आफ्नो औंलाहरुमा हुनुपर्छ। साथै, तपाईंले विभिन्न तरिकामा हाम फाल्न पर्छ। त्यसपछि दुई खुट्टा, त्यसपछि एक मा, खुट्टा एकान्तरण, त्यसपछि उनलाई, uncrossed को पालैपालो प्रवेश, आदि
दोस्रो, तपाईं एक दिन आधा घण्टा नियमित र कम से कम हाम फाल्न गर्न आवश्यक छ। केवल न्यानो-अप मा दुर्लभ desyatiminutki खींच, तिनीहरूले यो डोरी को मद्दतले वजन गर्न सम्भव छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्न जवाफ दिन छैन।
व्यायाम दक्षता कसरी सुधार गर्न
निस्सन्देह, तपाईं वजन गर्न सक्छन् जो को मदद संग, छनौट, यो आवश्यक एक डोरी संग अभ्यास गर्न प्राथमिकता दिन छ। आफ्नो प्रभाव फेसनदार आहार को बहुमत भन्दा धेरै राम्रो हुनेछ। , व्यायाम माथिको सहित, हृदय प्रणाली सम्पूर्ण शरीर बलियो, राम्रो आकार मा कायम। तथापि, व्यवहार मा, यो स्पष्ट वजन एक डोरी केही पाठ पर्याप्त छैन भन्ने हुन्छ।
शरीरमा यस्तो व्यायाम को प्रभाव को peculiarity बोसो हानि संयन्त्र लगातार जम्पिङ मात्र पछि 40 मिनेट रूपबाट त्यस्तो छ। र अघि त्यसपछि छिटो सेट नयाँ वजन जवाफ जो मांसपेशी तन्तु, को क्षरण हुन्छ। तसर्थ, कुनै पनि सेट फिताले अभ्यास मात्र अन्य खेल गतिविधिहरु एक पूरक रूपमा राम्रो छ। डोरी जम्पिङ मांसपेशिहरु जिम मा अन्य सिमुलेटर गर्न नजिकिंदै बीच मा शांत छैन भनेर, व्यायाम अघि अप वार्मिंग लागि प्रभावकारी छन्। तर तिनीहरू द्वारा प्रभावकारी वजन उपकरण हुन सक्दैन।
साथै, तपाईंले व्यायाम बाल्न (डोरी सहित) गर्दा कि सम्झना बोसो ऊतक Xia बोसो भन्दा एकदम भारी छ मांसपेशिहरु, निर्माण प्रतिस्थापन।
त्यसैले, वजन मा कुनै कमी र शरीर को मात्रा मा परिवर्तन त्यहाँ छ: कमर र पेट, "breeches" नितम्ब फिर्ता देखि गुना छोडेर कडा,। तर रोजगार को ब्यालेन्स मा तीव्र र महत्वपूर्ण पारी खेल आशा गर्नु हुँदैन।
त्यसैले तपाईं वजन के गर्न सक्नुहुन्छ देखि? जवाफ सरल छ: यसलाई उचित पोषण र स्वस्थ खेल लोड गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। फिताले अभ्यास सहित। यो संयोजन अतिरिक्त वजन को छुटकारा रही लागि आदर्श छ।
कसरी वजन हटाउन?
सुधार बेल्ट "मिस बेल्ट": समीक्षा, दक्षता र परिणाम
कूल्हों लागि सबैभन्दा प्रभावकारी अभ्यास
पूर्व slenderness कसरी पाउन: Garcinia पातलो
एक हप्तामा वजन सबै भन्दा राम्रो तरिका
अद्वितीय तरकारी ककडी: सिफारिसहरू को प्रयोग, क्षति
ब्लू-मुकुट ओक्टोपस: एक्वैरियममा प्रजाति, आवास, प्रजनन र सामग्रीको विवरण
म टाइल र ठोस फर्श मा आफ्नै शौचालय कसरी स्थापना गर्नुहुन्छ?
खेलकुद जटिल "Luzhniki" प्राप्त कसरी? मेट्रो - सबैभन्दा सुविधाजनक बाटो
लक्षण र प्रभाव: को निद्रामा पुरानो कमी
अनुभव, समस्या र संभावनाहरु: को GEF परिचय